Shina Garden Light mpanamboatra ary mpamatsy - Langxu Lighting.
Ny jiro zaridaina dia fantatra koa hoe jiro anatiny dia karazana jiro ivelany. Matetika dia mitrandraka arabe ivelany eny ambanin'ny 6 metatra izany. Ny singa lehibe indrindra amin'ny zaridaina zaridaina dia ahitana loharanom-pahalalana maivana, jiro, jiro maivana, flange ary ireo singa mifangaro.
Ny jiro zaridaina dia marika amin'ny fahalalany sy ny aesthetika ary fantatra koa amin'ny hoe fahazavana zaridaina. Ny jiro zaridaina indrindra dia ampiasaina amin'ny jiro ivelany any amin'ny làlana miadana any an-tanàna, làlana tery, trano fonenana, fizahan-tany, fizahan-tany toy ny valan-javaboary sy plazas, izay mety haharitra ny fotoana fanaon'ny olona any ivelany sy hanatsarana ny fiarovana ny fananana.
masoandro LED zaridaina fahazavana
The masoaryro zaridaina fahazavana dia tsotra ny hametraka ary foana, tsy misy mila ny naryry ambanin'ny tany tariby, tsy misy mila ny maryoa vola for fahazavanaing herinaratra, miovaova ary azo antoka asa, tsy misy fitantanana, ela fanompoana fiainana ary angovo fahavaratra.
Hamaky bebe kokoa Send Inquiry
LED zaridaina jiro
The vidin'ny ny LED zaridaina fahazavana dia ho hotter noho ny fa ny avo tsindry ny ny sodium jiro. Raha ampitahaina amin'ny avo tsindry Nano jiro amin'ny 6 metatra LED zaridaina fahazavana, ny fahefana fihinanana ny avo tsindry Nano jiro dia about 250 Watts, LED ihany zavatra ilaina 60 Watts, in ny fanompoana fiainana anjara, avo tsindry ny ny sodium jiro eo ho eo About 4000 ora, fa LED afaka farany ny ny 50.000 ora.
40W LED masoandro kianja fahazavana zaridaina fahazavana
Vaovao famolavolana aluminium zaridaina fahazavana tontolo fahazavana
Buy Garden Light nyvy nymin'ny Lnyngxu Lighting mpnymnytsy nyry mpnymoknytrny, isikny mnynnynny ny betsaka ny fomba Garden Light ao amin'ny staoky. Welcome ny fitsaharana nyssured ny wholesnyle nyry cusnymized Garden Light Style nyvy nymin'ny ny fnycnyry, isikny dia manome ianao amin'ny chenyp pricelist nyry tsara indrindra quotnytion for ianao.